ဖုန်းလွတ်ကျပြီး မှန်မကွဲသွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ ….
ဖုန်းလွတ်ကျပြီး မှန်မကွဲသွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ …. တစ်နေ့ကပေါ့ ဖုန်းလွတ်ကျသွားလို့ မှန်မကွဲလေးက အပ်ရာထင်သွားတယ် ဒါနဲ့ပဲ …..ဖုန်းဆိုင်မှာ သွားပြီး အသစ်လဲမလို့အသွား ရိုးသားလှတဲ့ သာမာန်အလုပ်သမား တောသူတောင်သား သားအမိနှစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိတယ် …. ။ ကျွန်တော်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ မိခင်အိုတစ်ဦးနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ပြောင်းဖူးတွေ အပြည့်တင်ထားတဲ့ စက်ဘီးတစ်စီးကို Continuous reading
ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် 😱👇😱 ပဲပင်ပေါက်စားသူတိုင်းသိဖို့ မျှဝေပေးပါ.. (အမြစ်လည်းတို အသက်လည်းတို)
ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် 😱👇😱 ပဲပင်ပေါက်စားသူတိုင်းသိဖို့ မျှဝေပေးပါ.. (အမြစ်လည်းတို အသက်လည်းတို) မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပဲပင်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အကြံတောင်းတဲ့အခါ လုပ်နည်းစနစ်လေးတွေ ပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့။ နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူကဖုန်းဆက်တယ် ” ကိုကြမ်းရေ ” ပဲပင်ပေါက်လုပ်တဲ့နည်းမှာ ဆေးသုံးကြတယ်ဗျ။ အဲ့ဒိဆေးသုံးရင် ပဲပင်ပေါက်အမြစ်တွေ မပါသလောက်ကို တိုတယ် အဲ့ဆေးအမည်သိလား”ကိုကြမ်း” ဟာ ငါသိတဲ့နည်းက Continuous reading
ဇနီးကို Surprise လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကာ မျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသား
10/09/2019 Thu Yay 0
ဇနီးကို Surprise လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကာ မျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသား ချစ်သူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို Surpriseလုပ်တယ်ဆိုတာဟာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပျော်ရွှင်စေတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အသက် ၃၄နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ surpriseလုပ်ပေးမယ်လို့ ဇနီးသည်ကိုပြောပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ The sun websiteရဲ့ဖော်ပြချက်အရ တရားခံဖြစ်သူအမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ဇနီးကို surpriseလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အိပ်ရာပေါ်မှာမျက်လုံးမှိတ်ကာ Continuous reading
တစ် နှစ် မှာ ( ၄ ) ကြိမ် သာ မြင် ရ တဲ့ ထိုင်း နိုင် ငံ ရှေး ဟောင်း ဘု ရား ကျောင်း ထဲ က ထူး ခြား တဲ့ အ လင်း ရောင်
တစ် နှစ် မှာ ( ၄ ) ကြိမ် သာ မြင် ရ တဲ့ ထိုင်း နိုင် ငံ ရှေး ဟောင်း ဘု ရား ကျောင်း ထဲ က ထူး ခြား တဲ့ အ Continuous reading
တစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ် တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ရှေ့တိုင်းမှာ လေယာဉ်ပါကင်ထိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ကျော်နေရာ
တစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ် တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ရှေ့တိုင်းမှာ လေယာဉ်ပါကင်ထိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ကျော်နေရာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ခြံ ကား နဲ့ နေနိုင်တဲ့သူတွေကို ချမ်းသာ တယ် လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမေရိကန် က နေရာတစ်ခုက တော့ အဲဒီထက်ပိုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖလော်ရီဒါ Continuous reading
တက်တူးထိုးတာ မထိုးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သမီးလေးကို ပိတ်ပင်ထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ ခင်လှိုင်
တက်တူးထိုးတာ မထိုးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သမီးလေးကို ပိတ်ပင်ထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ ခင်လှိုင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဟာသလူရွှင်တော် ဦးခင်လှိုင်ကတော့ လတ်တလောမှာ သမီးချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်ဆိုခြင်းကိုလည်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့်ဟာဆိုရင်လည်း (၂၀၁၉)ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးမှာ ရွှေကြိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို Continuous reading
စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ ထိုးဖောက်နိုင်မယ့် ရိုးရာ ယမကာများ
စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ ထိုးဖောက်နိုင်မယ့် ရိုးရာ ယမကာများ အရက်တွေ အခွန်လျှော့ကောက်ဖို့ အခွန်လျော့ ကောက်မှ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဟာ သွင်း ၊ အရည်အသွေးကောင်း အရက် သောက်ပြီး ခေါင်းကြည်မယ် အကြောင်းလွတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံခြား အရက်တွေ သွင်းမှမဟုတ်ပါဘူး Continuous reading
ခရီးသွားရင် ဖယောင်းတိုင်ဆောင်ထားပါ ကျ တော် ငယ် ငယ် ကား စီး ရ တာ ကြိုက် ပေ မဲ့ အ သက် 20 လောက် မှာ ကား စီး ရင် ကား မူး လာ ပါ Continuous reading
Total Hits : 1238863